Mandrahona Am-pamazivaziana An’ireo Mpanao Gazety Amin’ny Basy Ny Filoha Tseky · Global Voices teny Malagasy
Mandrahona Am-pamazivaziana An'ireo Mpanao Gazety Amin'ny Basy Ny Filoha Tseky
Voadika ny 16 Novambra 2017 5:44 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Türkçe, English
Pikantsary tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety 20 Okt navoaka tao amin'ny pejy Facebook ofisialin'ny filohan'ny Tseky, Miloš Zeman.
Ny Zoma lasa teo, nandrangaranga basy hazo ny filohan'i Tseky, Miloš Zeman miaraka amin'ny soratra hoe ‘ho an'ny mpanao gazety’ nosoratana teo akaikin'ny basy, mirehareha izy fa fanomezana tamin'ny fitsidihany vao haingana tany amin'ny faritra andrefan'ny firenena izany.
Tsy faly tamin'ity vazivazy farany nataon'ny filoha Zemen, lehilahy iray fantatra amin'ny tsikerany mavesatra amin'ny mpiasan'ny media ity, ireo mpanao gazety sy olom-pirenena izay tsy nankasitraka ny hatsikana nataony.
Raha nanatontosa valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety momba ny fitsidihany tany amin'ny faritra andrefan'i Plzeň, tsy nahitana tsiky i Zeman ary nanetsiketsika ilay basy hazo AK-47 izay voalaza fa nomena azy nandritra ny fitsidihana. Eo amin'ny toeran'ny bala, ahitana tavoahangy likera Becherovka (ranom-boankazo mangidy mitovy amin'ny Jägermeister) ilay fitaovam-piadiana tsy tena izy.
Namazivazy ihany koa i Zeman fa tsy tokony hatahotra ireo mpanao gazety maka horonan-tsary azy satria “tsy fantany ny fomba fakàna sary.” Naneho fahafaham-po tamin'ny tsy fisian'ireo prô-mpanohitra tamin'ireo mpanatrika ihany koa izy.
Tsy vao voalohany izao i Zeman no namazivazy momba ny fandrahonana mpanao gazety. Tamin'ny volana Mey, nandritra ny fitsidihany an'i Shina, voalaza fa namazivazy ny filoha Rosiana Vladimir Putin izy fa “maro loatra ireo mpanao gazety, ka tokony hovonointsika izy ireo.”
Tsy faly ilay mpanao gazety mpanao fanadihadiana Onrej Kundra. Tamin'ny tsikeran'i Kundra momba ny fanehoan-kevitra farany nataon'ny filohan'i Tseky, nanondro tranga iray hafa izay niseho herinandro talohan'izay izy, nandritra ny fitsidihan'i Zemen tany Frantsa, raha nilaza tamin'ny mpiambina azy ny filoha fa hamono mpiasan'ny televiziona Tseiky izy raha tsy roahan-dry zareo io:
Novinari by se meli likvidovat, rozpravel Zeman s Putinem. Vyzente kameramana, nebo ho zabiju, pokracoval ve Francii. A dnes tasil samopal.
— Ondrej Kundra (@okundra) October 20, 2017
Tokony hovonoina ireo mpanao gazety, hoy i Zeman tamin'i Putin. Esory ny mpaka sary na hovonoiko izy, hoy izy nanohy tany Frantsa. Ary ankehitriny, nandrangaranga basy izy.
Andrew Stroehlein, talem-paritra ao amin'ny Mpanara-maso ny Zon'Olombelona Eoropa, nisioka hoe:
Nitàna basy natao hamazivaziana ahitana soratra hoe “ho an'ireo mpanao gazety” ny filohan'i Tseky, Miloš Zeman. Tsy mampihomehy
Nilaza ireo mpaneho hevitra sasany fa tsy kisendrasendra ny fisian'ny toaka tao amin'i Zeman.
Zeman nalitý becherovkou dostal samopal nabitý becherovkou. 🤔
— Siderické kyvadlo (@SideKyva) October 20, 2017
Nahazo basy feno Becherovka i Zeman nosorana tamin'ny Becherovka.
Filohan'ny Repoblika Tseky nanomboka tamin'ny taona 2013 i Miloš Zeman ary nanambara ny fikasany hirotsaka fanindroany amin'ny fifidianana hoavy taona 2018.
Nandresy ny fifidianana solombavambahoaka ny mpiara-dia azy hatry ny ela, ilay miliaridera mpandrendri-bahoaka sy tremalahin'ny media Andrej Babiš, ary lasa praiminisitra nony farany. Araka ny filazan'ny Euronews, nividy ampahany betsaka tamin'ireo media ao amin'ny firenena i “Babiš, lehilahy manankarena faharoa ao amin'ny firenena mba hampanginana ny tsikera ary, araka ny hevitry ny mpitsikera azy, mba hanohintohinana ny demokrasia.”
Nidina ny laharan'ny repoblika Tchèque tamin'ny Tondro momba ny Fahalalahan'ny Gazety manerantany nandritra ny taona vitsy.
Araka ny voalazan'ny Tondro momba ny Fahalalahan'ny Gazety Manerantany navoakan'ny Reporters without Borders, nidina avy amin'ny laharana faha-14 ny laharan'ny Repoblika Tseky tamin'ny taona 2012 rahaka nankany amin'ny laharana 23 izany tamin'ny taona 2017.
Several bills were drafted during 2016 with the aim of increasing the penalties for criminal defamation, especially when the President is concerned. The concentration of media ownership has reached critical levels. Since 2008, new oligarchs have been using their fortunes to buy up newspapers to consolidate their influence. One of them, Andrej Babiš, is both Deputy Prime Minister and Finance Minister as well as owner of the two most influential daily newspapers…
Volavolan-dalàna maromaro no natao tamin'ny taona 2016 ka ny tanjona dia ny hampitombo ny sazy ho an'ny fanalam-baraka, indrindra raha voakasik'izany fanalam-baraka izany ny filoha. Nahatratra haavo atahorana ny fivangongoan'ny tompon'ny fampielezam-baovao. Hatramin'ny taona 2008, nampiasa ny harenany mba hividy gazety ho fanamafisana ny fahefany ireo olom-boafidy vaovao. Anisan'izy ireo i Andrej Babiš, Praiminisitra lefitra sady minisitry ny fitantanam-bola ary koa tompon'ireo gazety roa mpivoaka isan'andro goavana indrindra …
Eo amin'ny sehatra Eoropeana, heverina ho tsy dia mendrika loatra ny basin'i Zeman, satria tonga andro maromaro taorian'ny namonoana ilay mpanao gazety mpanao famotorana, Daphne Caruana Galizia tany Malta, firenena mpikambana ao amin'ny Vondrona Eoropeana.
* Fanamarihana amin'ny fandikan-teny: nampiasa ny teny hoe “samopal,” midika hoe basy marovava i Zeman, mba hanondroana ny fitaovam-piadiany vita amin'ny hazo. Ny AK-47 dia basy mahery vaika, izay antsoina hoe “útočná puška” na “automatická puška” amin'ny teny Tseky. Samy miavaka amin'ny habeny ireo karazana fitaovam-piadiana roa ireo, ny halavan'ny basy, ny tahan'ny tifitra, ny havesatry ny bala ary indrindra ny halavirana tongan'ny bala (am-polony metatra ny iray ary an-jato metatra ny iray hafa). Ny taloha dia heverina ho toy ny ‘basy poleta’, raha toa ka heverina ho eo anelanelan'ny basy sy basy marovava ilay farany, ary nandritra ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha-20, nosoloina fitaovam-piadiana mahazatra ho an'ny ankamaroan'ny tafika manerana izao tontolo izao ireo basy roa ireo.